Kusuruvara, naDaniel Martín Serrano. Ongorora | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Mabhuku, Nhema nhema, dzakawanda
Insomnia ndiyo yekutanga solo inoverengeka na Daniel Martin Serrano, asi uyu Madrilenian ane zvakawanda zvekunyepedzera shure kwake aine makore makumi maviri ebasa rekuve akateedzana scriptwriter Chemhondoro Central Hospital, vherevheti, Muchinda o Makungwa akakwirira. Iye ari purofesa weTerevhizheni Chinyorwa paMadrid Film School uye parizvino azvimisikidza neiri diki genre zita riri kuwana budiriro yakajairika pakati pevaverengi nevatsoropodzi. Uye zvangu yave iri rimwe remabhuku egore rino. Izvi zvangu ongorora iyo, nerombo rakanaka, ini ndakakwanisa kugovera nemunyori paMadrid Book Fair.
1 Kusarara - Kuongorora
1.4 A asi
Insomnia - Ongorora
Aimbova Inspector Tomás Abad anorwara kusuruvara chisingaperi uye, kupfuura izvozvo, zvinotyisa. Uye kana iwe uchinge wasvika kune yekupedzisira peji reinovhuru, iwewewo unofunga wabata iye kuneta uye neshungu. Uyezve, rondedzero yenhoroondo yayo haina kukupa zororo, uye ndiwo mwero we kunetseka uye rima uyo anotambura nekuda kwechipo chake nekare rake izvo iwe unotenda nezororo zororo ravo, Kunyange zvakadaro.
Chokwadi ndechekuti Tomás zvaifamba zvakanaka mumapurisa, anga ari shasha nyanzvi nechikwata chinoshanda chakatenderedza uye chayo hupenyu hwega Izvo zvakashanda zvakare, nemuchato wakanyarara asi nemwanakomana waakangoona zvishoma nekuda kweiri basa rinotora. Asi izvo basa anova obsessive pavanotanga kuoneka mitumbi yevechidiki yakatemwa misoro izvo zvinozoita murwi mune macabre puzzle.
Wobva waona kuti pane mumwe munhu wepedyo kune uyo ariko kubatanidzwa uye zvinoita kunge kudarika mhosva. Uku ndiko kuchave kukanganisa kwako, nekuti sarudzo yakaipa izvo zvinotora kumuchengetedza chichava chikonzero chake kudzinga, kudzingwa uye kurambwa nechikamu chakanaka chevanhu. Kubva ipapo kuenda pasi kugehena zvinogadzirwa nekushaya hope, culpa uye kuwedzera kubatikana apo, panguva ino, uchiri kuyedza kurarama nayo muchengeti husiku mu kupaka uyezve mune hukuru makuva de la Almudena, mumwe munhu anoita kuti uzive izvozvo hope dzemanheru hadzina kupera.
Imwe yei Hits yeruzivo ndeyekuti tiite kuburikidza nguva mbiri dzekurondedzera ayo anoratidzwa zvakare mu kushandiswa kwemutauro panguva ino - Zvezvino- uye munguva yakapfuura -Kutiudza chii chakaitika uye kuti takasvika sei kuchipo ichocho. Iyo poindi ndeyekuti iyo nyaya imwechete, kana zvese zviri zviviri, zvinomhanya zvakafanana ne nguva yakanyatso kuyerwa zvekuti inoratidza iyo bhizimisi risina mubvunzo yemunyori semunyori. Uye inozviita nemazvo zvekuti kunyangwe kune vaverengi vasingafarire kwazvo rondedzero yazvino, sezvazvakaita nyaya yangu, hainyunyuti zvachose.
Vanobatsirawo hurukuro dzakanaka uye rozari yemavara sekondari kusviba yakavakwa zvakanaka semunhu mukuru. Tomás achapora vamwe vavo, vanozoedza kumubatsira, semumwe wake wekare, uyezve vanowana vatsva. Asi hapana munhu anozokwanisa kudzivirira hupenyu hwake kubva mukunyura zvakanyanya, kurasikirwa nemhuri yake uye kuda kurasikirwa nepfungwa.
Imwe pfungwa yakasimba ndeye kuseta saka mukuenderana neyakaora moyo, chipoko uye ingangoita husiku toni mune Madrid kashoma kutsanangurwa nevakawanda kudaro rima. Uye zvakare, iyo yekupaka uye yekumakuva marongero anowedzera kusimudzira izvi kunzwa kusiri kwechokwadi kuti Abad ane. Iye anongoda kugadzirisa nyaya uye kurara, nekuti ane zvakakwana kuti aregerere mhosva huru iyo inomutambudza iye achitambura nekupererwa nekushaya hope kwakadai.
Kunyangwe yekuisa pamusoro uye zvine hukama chaizvo kana, zvirinani, zvangu, ngatiti nehunyanzvi default semunhu anoverenga kutanga uyezve semuverengi: ndima dzakarebesa, akawanda papeji rimwe chete. Asi izvo zvataurwa, rondedzero tempo inobudirira zvekuti vanoregererana.
Kuti Daniel Martín Serrano anga asingakwanise kuita kuti kutanga kwake kuve nani murondedzero, achibva kune rakasiyana, shanduko uye nekukurumidza mhando senge iri script. Nhau yakanaka, chimiro chakanaka uye magumo sekurairwa kwamakoni uye izvo zvinokusiya iwe nekunakirwa uko kunowanzo kukosheswa mumhando iyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Kusuruvara, naDaniel Martín Serrano. Ongorora